Nhau - Kugadzira Maitiro
1.Choose zvinhu: High borosilicate girazi chubhu
Kusarudza saizi yakakura, ukobvu uye dhayamita zvichibva pane zvigadzirwa zvinoda kugadzirwa. Uye pane mavara eakajeka, amber, bhuruu, yero, grey, pink, nhema, Ruvara runonyanya kushandiswa rwakajeka.
2.based pane chigadzirwa saizi kugadzira girazi kudhirowa
Pisa girazi chubhu uye bvisa iyo chubhu kune imwe mugumo, Wobva wabatanidza magumo akasara nepombi yerabha, Rimwe gumo repombi iri mumuromo mako, Panguva ino, girazi rinonyungudika, wozoiswa muforoma, ichivhuvhuta. mweya mugirazi, rega izvimbe, uye wozotenderedza chikamu chegirazi panguva imwe chete, rega ichitenderera muforoma
4. Ita muromo
Mushure mekudziya kwakawanda, kupisa tembiricha yegirazi pachayo kwakasiyana munzvimbo dzakasiyana, izvo zvinotungamira mukusagadzikana kusagadzikana kwechigadzirwa pachako. Chekupedzisira, chigadzirwa chinoda kudziirwa zvakaenzana kamwe.
Isa zvigadzirwa muchivharo chevira, Pane bhandi rekutakura rinouya mukati kumucheto uye kubuda kune rimwe. Panguva ino isa chigadzirwa kubva kune mumwe mugumo kupinda, zvishoma nezvishoma kubva pakadzika tembiricha kusvika kune yakanyanya tembiricha. Iyo tembiricha yepamusoro iri padyo nekwakanyungudika girazi, uyezve inoenda kubva pakakwirira tembiricha kusvika kune yakaderera tembiricha. Maitiro ese anotora inenge 1 awa. Chigadzirwa chinobuda seichi ndicho chakachengeteka.
Post nguva: Aug-20-2020